Ozone: waa maxay, sifooyinka, isticmaalka iyo muhiimadda | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 25/11/2021 13:28 | Ciencia
El ozone (O3) waa unug ka kooban saddex atamka oksijiinta. Waxa ay abuurmaan marka unugyadu oksijiin ay aad ugu farxaan si ay u kala jajabaan laba heerar tamar oo kala duwan oo ah ogsijiinta atomiga, isku dhaca u dhexeeya atamka kala duwana waa sababta ozone. Waa allotrope of oxygen, taas oo ah, waa natiijada dib u habeynta atamka ogsijiinta marka molecules la sii daayo. Sidaa darteed, waa qaabka ugu firfircoon ee ogsijiinta.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ozone, sifooyinka iyo muhiimada ay u leedahay nolosha.
1 Waa maxay ozone
3 Lakabka Ozone
Waa maxay ozone
Ozone waa unug gaas ah oo leh midab buluug ah. Xaalad dareere ah, Waa buluug indigo heerkul ka hooseeya -115ºC.Nuxurkeeda, ozone aad buu ogaysiiyaa, sidaa awgeed waxa ay masuul ka tahay jeermiska, nadiifinta iyo baabi'inta jeermiska bakteeriyada, sida fayrasyada, bakteeriyada, fungi, caaryada, kudka, iwm.
Ozone waxay baabi'in kartaa urta xun iyadoo si toos ah u weerarta sababta urta xun (walaxda uraysa) mana ku darto ur kale sida kuwa hawada nadiifiya si ay isku dayaan inay qariyaan. Si ka duwan jeermis-dileyaasha kale, ozone waa gaas aan degganayn oo si degdeg ah ugu milmi doona ogsijiinta hoos timaada ficilka iftiinka, kulaylka, shooga elektrostatic, iwm.., si aanay uga tagin hadhaaga kiimikaad.
Ozonization waa daaweyn kasta oo loo isticmaalo ozone. Codsiyada ugu muhiimsan ee daawayntan waa jeermis-dile deegaanka iyo carfaynta iyo daaweynta biyaha iyo nadiifinta. Sidan, microorganisms pathogenic iyo urta waa la tirtiri karaa.
Ozone waxaa si macmal ah u soo saari kara koronto-dhaliye ozone ama koronto-dhaliye ozone. Qalabyadani waxay hawada u soo jiidaan ogsijiinta gudaha gudaha waxayna dhaliyaan dareere danab ah oo ku dhex jira elektirodyada (loo yaqaan "saamaynta corona"). Soodejintaan kala saara labada atamka ee ka kooban qaybaha ogsijiinta, kaas oo isna isku darsada saddex ama saddex ka mid ah atamkan si ay u sameeyaan unug cusub oo loo yaqaan ozone (O3).
Sidaa darteed, ozone waxay u taagan tahay qaabka ugu firfircoon ee ogsijiinta, oo ka kooban saddex atom oo oksijiin ah, kuwaas oo la dagaallami kara xeryahooda dabiiciga ah ee pathogenic iyo / ama waxyeellada leh (qaybta ugu muhiimsan ee wasakhowga deegaanka).
Waxay noqon kartaa sifada ugu muhiimsan ee ozone waxayna leedahay codsiyo badan. Microorganisms waa nooc kasta oo nolosha ka mid ah Isha bini'aadamku ma arki karto waxayna u baahan tahay mikroskoob si loo eego. Microorganisms-ka loo yaqaan pathogens waa kuwa keeni kara cudurrada faafa. Waxay u muuqdaan inay ku nagaadaan dhammaan noocyada dusha sare, dhammaan noocyada dareeraha, ama sabbeeyaan hawada, oo ay la socdaan qaybo yaryar oo boodh ah, gaar ahaan meelaha xiran ee hawadu si tartiib tartiib ah u cusbooneysiiso.
Sababtoo ah sifooyinka oksaydhka, ozone waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah microbicides-ka ugu dhaqsaha badan uguna waxtarka badan ee loo yaqaan, awood u leh inuu ku dhaqmo tiro badan oo noolaha, sida bakteeriyada, fayrasyada, fungi iyo kudka. Dhammaan kuwan ayaa mas'uul ka ah dhibaatooyinka caafimaadka aadanaha iyo urta aan fiicnayn.
Ozone waxa ay hawlgelisaa noolahaan iyada oo la falgasha enzymes intracellular, walxaha nucleic acid iyo baqshadaha unugga, xadhkaha iyo koofiyadaha fayraska. Haddaba, Sababtoo ah burburinta walxaha hidde-sideyaasha, microorganisms ma bedeli karaan oo kobcin karaan iska caabbinta daaweyntan. Doorka ozone waa inay oksaydheeyaan qaybaha xuubka unugga si loo hubiyo inaanay dib u soo bixin.
Daaweynta Ozone waa mid aan ur lahayn, markaa mas'uul kama aha oo kaliya jeermiska iyo ka takhalusidda nooc kasta oo ur ah, laakiin sidoo kale ma tilmaamayso ur gaar ah dhammaadka isticmaalka. Waa in la ogaadaa in ozone uusan soo saarin wax qashin ah, maadaama ay tahay qayb aan xasilloonayn, waxay u egtahay inay ku soo noqoto qaabkeedii hore, Ogsajiinta (O2), sidaas darteed, ixtiraamka deegaanka iyo wax soo saarka, iyo hubinta wanaagga dadka.
Shaqada kale ee ozone waa in ay baabi'in karto nooc kasta oo ur xun ah iyada oo aan ka tagin hadhaaga. Daawaynta noocaan ah aad bay faa'iido u leedahay meelaha xidhan ee ay jiraan hawada si joogto ah looma cusboonaysiin karo. Meel bannaan oo noocan oo kale ah, haddii tiro badan oo dad ah ay soo galaan, waxaa soo baxaya ur aan fiicneyn (tubaakada, cuntada, qoyaanka, dhididka, iwm.) taas oo ay ugu wacan tahay saameynta molecules-ka laalan iyo microorganisms kala duwan oo ku jira.
Waxaa jira laba sababood oo keena weerarka ozone: dhinac, waxa ay oksidhis ka dhigtaa walxaha organic, marka laga reebo in ay ku weerarto ozone, dhinaca kale, waxay weerartaa microorganisms-ka quudiya. Ozone waxay weerari kartaa ur kala duwan. Dhammaan waxay ku xiran tahay nooca walaxda sababta urta. Iyada oo ku saleysan hantidaan, waxaad go'aamin kartaa u nuglaanshahaaga ozone iyo qiyaasta loo baahan yahay si looga saaro ozone.
Ozone waa ilaaliyaha muhiimka ah ee nolosha oogada Dhulka. Tan waxaa sabab u ah shaqadeeda sida shaandhada ka ilaalisa shucaaca ultraviolet ee ka yimaada qorraxda, Ozone ayaa mas'uul ka ah nuugista inta badan fallaadhaha qorraxda kuwaas oo ku dhex jira hirarka u dhexeeya 280 iyo 320 nm.
Marka shucaaca qorraxda ee 'ultraviolet radiation' uu ku soo dhacayo ozone, molecule-ka wuxuu u kala baxaa oksijiin atom ah iyo oksijiin guud. Marka oksijiinta caadiga ah iyo atomku ay markale ku kulmaan stratosphere waxay dib ugu biiraan si ay u samaystaan ​​molecule ozone. Dareen-celintani waxay joogto ku tahay stratosphere iyo ozone iyo oksijiin isla markaaba way wada socdaan.
Ozone waxa la soo saaraa inta badan marka unugyada ogsijiinta ay helaan xaddi tamar badan. Marka tani dhacdo, molecules-yadani waxay isu beddelaan xag-jirrada ogsijiinta ee atomiga. Gaaskani aad buu u degganayn, marka marka ay la kulanto unugya oksijiin kale oo caadi ah, waxa ay isku darsami doontaa si ay u sameeyaan ozone. Falcelintani waxay dhacdaa labadii ilbiriqsi kasta ama wax ka badan.
Xaaladdan, ilaha tamarta ee oksijiinta caadiga ah waa shucaaca ultraviolet ee qorraxda. Shucaaca ultraviolet -ka ayaa sabab u ah kala -guuridda oksijiin molikula oo ku jira oksijiin atom. Marka atamka iyo molecules of oxygen molecular ay kulmaan oo ay sameeyaan ozone, waxaa burburiya shucaaca ultraviolet laftiisa.
Lakabka ozone waa joogto abuurista iyo burburinta moleculeyaasha ozone, oksijiin moleculeel iyo oksijiin atom ah. Sidan oo kale, isu-dheelitirnaan firfircoon ayaa la soo saaraa taas oo ozone la burburiyo lana sameeyo. Tani waa sida ozone u dhaqmo sida miiraha oo aan u oggolaanayn shucaaca waxyeellada leh inuu u gudbo dusha sare ee Dunida.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto ozone iyo sifooyinkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Ozone